ကိုယ်ရေးအကျဉ်း | ဥက္ကာကိုကို
မွေးသက္ကရာဇ်— 13 ,8, 1988 .
ဆယ်တန်းကို—ဘိုင်အိုတွဲဖြင့် သံတွဲမြို့ အ.ထ.က-၁ မှ 2004 ခုနှစ်တွင် အောင်မြင်သည်။
တက္ကသိုလ်—စစ်တွေတွင် ဒဿနိကအထူးပြုဖြင့် တက်ရောက်သင်ကြားနေဆဲ။
စာပေလောကထဲတွင်—2005 . ဇန်န၀ါရီ . ရတီမဂ္ဂဇင်းတွင် “ဂြိုဟ်သားတစ်ချို့နှင့်စကားပြောခြင်း” ကဗျာဖြင့် စတင်ခြေချသည်။
ရန်ကုန်မြေသို့-– 2007 ဇူလိုင်တွင် ရောက်ရှိခဲ့သည်။
2007 . အောက်တိုဘာ 11 –တွင်7 Day New ဂျာနယ်၌
လက်ရှိ မဂ္ဂဇင်းများတွင် ကဗျာနှင့် ၀တ္ထုတိုများ ၊ အက်ဆေးများ ၊ ဟာသနှင့် သရော်စာများ ကြိုကြားကြိုကြားရေးသား။
ဒီမိုကရေစီရလျှင် – ပစ္စတိုသေနတ်ကောင်းကောင်း တစ်လက်လောက်ဝယ်ကိုင်ချင်သည်။
အရက်၊ မိန်းမ အစရှိသဖြင့်မကောင်းတာမှန်သမျှစပ်ဖြီးဖြီးနှင့် နည်းနည်းနည်းနည်း စမ်းစမ်းကြည့်တတ်သည်။
6 comments on “ကိုယ်ရေးအကျဉ်း”
HMW on May 20, 2013 at 4:09 pm said:
ဆက်လုပ်ကွာ…ငါ့ လည်း ဘီယာတိုက်ဦးကွာ
Anonymous on September 12, 2012 at 6:52 am said:
အခု ဒီမိုကရေစီက နဲနဲရနေပြီ
ဒါဆို (ပစ္စတိုသေနတ်ကောင်းကောင်း တစ်လက်လောက်ဝယ်ကိုင်ချင်သည်။
အရက်၊ မိန်းမ အစရှိသဖြင့်မကောင်းတာမှန်သမျှစပ်ဖြီးဖြီးနှင့် နည်းနည်းနည်းနည်း စမ်းစမ်းကြည့်တတ်သည်။) ဆိုတဲ့
ဘိုးတော် A to Z ရောဂါများရော ကန်ထရိုက်ဆွဲပြီးပြီလားဟင်
Anonymous on August 7, 2012 at 9:06 am said:
ရေးထားတဲ့ ပါပြီးသားတွေ ရော ၊မပါခဲ့တာတွေရော၊ မပို့ဖြစ်လို့ သိမ်းထားတာတွေရော အကုန်တင်ပေးပါ .ဖတ်ချင်ပါတယ်။ ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။
Anonymous on August 7, 2012 at 9:04 am said:
ပေါချက်က ၉ လောက်ရှိတယ် .ဟေးဟေး
aung aung on January 24, 2012 at 6:32 am said:
ဟားးးးးးးး အဘအကြောင်းလေး ၀င်ဖတ်မိပါတယ်..
seasar on September 20, 2011 at 7:58 am said:
564192 is your Facebook account recovery code
984568 is your Facebook account recovery code
Anonymous on ငါသေခဲ့သော်…..